२०७७ कार्तिक ५ गते, बुधबार | eAdarsha.com
अघिदेखि रोकिएका कार्यमा सफलता मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । धार्मिक कार्यमा आस्था जाग्नेछ । आफन्तजनसँग मिलन हुनेछ । शुभ खबर सुन्न पाइनेछ । काम गरेर छोटो समयमा नै लाभ लिन पाइनेछ ।
शारीरिक कमजोरीले सताउनेछ । नयाँ लगानि उचित देखिन्न । शैक्षिक उपलब्धिमा ह्रास आउनेछ । काम गरेर जस भन्दा अपजसको सामना गर्नु पर्नेछ । सुस्तकाम गतिले गर्दा महत्वपूर्ण अवसर गुम्नेछ, जागरुक हुनु होला ।
श्रृंगारिक कार्यमा मन रमाउने देखिन्छ । विपरीत लिंगीको सहयोगले महत्वपूर्ण कार्यको संझौता हुनेछ । प्रेम प्रसंगले मूर्त रुप लिनेछ । प्रीयजनसँगको रमाइलो भ्रमण हुनेछ । सांगितिक क्षेत्रबाट मान–सम्मान पाइनेछ ।
व्यवसायबाट अपेक्षित लाभ मिल्दा हर्ष बढ्नेछ । श्रमको सही मूल्यांकन होला । प्रतिष्पर्धात्मक काम कार्यमा विजयी भइनेछ । सामान्य झमेला आइलाग्न सक्छ, अडिक भएर कार्यमा लाग्नुहोस् जीत तपाईँकै हुनेछ ।
सन्तानको सहयोगले कार्य गर्दा असहज कार्य पनि सरल तवरले बन्नेछन् । खुसीयाली छाउनेछ । मनोरञ्जतात्मक कार्यमा रमाइनेछ । अध्ययन अध्यापन एवं प्रतिभाका कार्यमा विजयी भइनेछ । प्रतिक्षित नतिजामा सफलता मिल्नेछ ।
हातहतियारको प्रयोग गर्दा सावधान रहनु आवश्यक देखिन्छ । सोचे अनुरुप काम नबन्दा दिक्क लाग्नेछ । स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । विश्वास गरेका व्यक्तिले साथ छाड्ने छन् । आर्थिक लेनदेनमा विवाद पर्नेछ ।
बन्धुवान्धवसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ । व्यवसायबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ । काम गरेर चित्त बुझाउन सक्दा जिम्मेवारी थपिनेछ । एकल प्रयासले नै धेरै क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाइनेछ । पढाइमा रुचि बढ्नेछ ।
द्वितीयेश चन्द्रमाले अल्छिपना ल्याउन सक्छ, तदारुक्ताका साथ कार्यमा लाग्नु होला । धन सञ्चय गर्न मन लाग्नेछ । बाक् कलाको विकास होला । कुटुम्बको सहयोगले अघि बढ्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ ।
स्वास्थ्य अवस्था ठिकठाक नै रहला । मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ । विशिष्ट कार्यमा अतिथिको सत्कार पाइनेछ । आत्मसन्तोष मिल्नेछ । देशदेशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व रहनेछ ।
नयाँ कार्यको सुरुवाति गर्दा बाधा अड्चनहरु आउने छन् । मानसिक चिन्ता, पीर थपिनेछ । सञ्चित धन खर्च गर्नु पर्दा नैराश्यता छाउनेछ । सामान्य कार्यमा पनि कडा परिश्रम गर्नुपर्ला, सतर्क रहनु होला ।
आर्थिक उपार्जनका कार्यमा चासो रहनेछ । व्यवसायमा नयाँ सिपको प्रयोगले नाफादर बढाउन सकिनेछ । सहोदरका व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्नेछ । हर्ष बढ्नेछ । सकारात्मक सोच विचारको उदय हुनेछ ।
इमान्दारीताको कदर हुनेछ । व्यवहारिक पक्ष सबल रहनेछ । मांगलिक कार्यमा सहभागी भइनेछ । घरायसी समस्या हल भएर जानेछ । अनुकूलको वातावरण बन्नेछ । काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ । दिन शुभ रहनेछ ।
वि.सं. २०७७ साल कार्तिक ५ गते बुधबार, तदनुसार ई.सं. २०२० अक्टोबर २१ तारिख, प्रमादीनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, शरदऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विनशुक्लपक्षको पञ्चमी तिथि दिवा २ः५१ बजेसम्म, त्यसपछि षष्ठी तिथि रहनेछ ।
नक्षत्र नक्षत्र ः ज्येष्ठा पूर्वान्ह ८ः२७ बजेसम्म, त्यसपछि मूल रहनेछ ।
विष्कुंभादी योग विष्कुंभादी योग ः शोभन दिवा १ः३७ बजेसम्म, त्यसपछि अतिगण्ड रहनेछ ।
आनन्दादी योग आनन्दादी योग ः ध्वांक्ष ।
करण करण ः कौलव रात्रि २ः०२ बजेसम्म, त्यसपछि गर रहनेछ ।
श्रीसूर्य श्रीसूर्य ः तुला राशिमा, चन्द्रमा ः बृश्चिक राशिमा विहान ८ः२७ बजेसम्म रहनेछ ।
सूर्योदय सूर्याेदय ः ६ः०८ बजे, सूर्यास्त ः बेलुका ५ः२७ बजे ।